Covid Antibody Test Kit ဆိုတာ – DR NU MYAT THEINGI OO
Posted on October 1, 2021 by Nu Myat
ကိုဗစ်ဖြစ်အပြီး ၂၁ ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ Covid Antibody ထွက်လို့လာပါပြီ။
IgG Antibody ထွက်ရင် ကိုယ်ထဲမှာ ကိုဗစ်ပိုးတွေမရှိတော့သလို နောက်သုံးလကနေ ခြောက်လအထိလည်း တော်ရုံနဲ့ ကိုဗစ်မကူးနိုင်တော့ပါဘူး။
Antibody ထွက်မထွက်ကို Rapid Antibody Test Kit လေးနဲ့ စစ်လို့ရပါတယ်။ ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးသူများ Antibody ထွက်မထွက်စစ်သင့်ပါတယ်။ ဈေးက ၁၅၀၀၀ ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီး အိမ်မှာတင် အလွယ်တကူစစ်လို့ရပါတယ်။
• Antigen Test Kit နဲ့ မတူတာက Antigen Test က နှာခေါင်းတို့ဖတ်ယူစစ်ရတာဖြစ်ပြီး ကိုဗစ်ပိုးရှိမရှိ စစ်တာပါ။ Test kit မှာ နှစ်ကြောင်းပဲပါပြီး တစ်ကြောင်းပဲပေါ်ရင် -ve (ကိုဗစ်မရှိ)၊ နှစ်ကြောင်းပေါ်ရင် +ve (ကိုဗစ်ရှိ) ပါ။
• Antibody Test Kit ကတော့ သွေးဖောက်စစ်ရတာပါ။ လက်ထိပ်ကို ဆီးချိုစစ်သလို သွေးဖောက်စစ်ပြီး စစ်ရတာပါ။ လိုင်း ၃ လိုင်းပါပြီး ပေါ်တဲ့လိုင်းပေါ်မူတည်ပြီး လက်ရှိ ကိုဗစ်ဖြစ်နေလား။ ပျောက်ပြီးတော့ ကိုဗစ်ကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ Antibody ထွက်နေပြီလားဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ အဖြေဘယ်လိုဖတ်ရလဲ ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်မှာ အသေးစိတ်ရေးပေးထားပါတယ်။
Covid Antibody Test Kit ဆိုတာ Covid နလံထစ လူနာတွေအနေနဲ့ ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးနောက် ခန္ဓာကိုယ်က ကိုဗစ်ပိုးကို အလိုအလျောက်တုန့်ပြန်တဲ့ ကိုယ်ခံအား Antibody ထွက်မထွက်ကို စစ်ဆေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ရှင်းချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Covid ဖြစ်သွားပြီးနောက် ကိုယ်ခံအားရမရ သိချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Antibody Test Kit ကို စစ်သင့်တဲ့အချိန်ကတော့ နှာခေါင်းတို့ဖတ်ယူစစ်ရတဲ့ Antigen Test kit နဲ့ စစ်လို့ Covid (+)ve ဖြစ်ပြီး ၁ ပတ်ကနေ ၃ ပတ်ကြားပါ။ Antibody က အစောဆုံး နှစ်ပတ်အကြာမှာ ထွက်တာမလို့ နှစ်ပတ်ကျော်မှ စစ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။
Antibody Test Kit တစ်ခုဝယ်ရင် တစ်ခါသုံးအပ်၊ အရက်ပြန်သုတ်ထားတဲ့ဂွမ်း (Alcohol Pad) ၊ သွေးယူတဲ့ပြွန်တံ၊ ဆေးရည်ဗူး၊ စစ်တဲ့အပြား (Test Kit) ပါပါတယ်။1. လက်ချောင်းထိပ်ကို အရက်ပြန်ပါတဲ့ဂွမ်းနဲ့သုတ်ပြီး တစ်ခါသုံးအပ်နဲ့ ဆီးချိုစစ်ရင်ဖောက်သလို တစ်ချက်ဖောက်လိုက်ပါ။ 2. ပထမဆုံးထွက်တဲ့သွေးကို မသုံးဘဲ သုတ်ပစ်လိုက်ပါ။ 3. ညှစ်လို့ ထပ်ထွက်လာတဲ့သွေးကို သွေးယူတဲ့ပြွန်တံနဲ့ ယူလိုက်ပါ။ 4. Rapid Test Kit ထဲကို သွေး ၁ စက်ချ ဆေးရည်ဘူးထဲက ဆေးရည်ကို ၂ စက်ချပါ။ တချို့ Test Kit မှာတော့ သွေး ၂ စက် ဆေးရည် ၁ စက် ထည့်ရပါတယ်။ ကိုယ်ဝယ်တဲ့ Test Kit အညွှန်းကို သေချာဖတ်ပါ။ တချို့ Test Kit မှာတော့ သွေးထည့်ရမယ့်နေရာနဲ့ ဆေးထည့်ရမယ့်နေရာ ၂ နေရာ ပါပါတယ်။ ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဆီက အညွှန်းသေချာမေးပေးပါ။ 5. အဖြေကို ၁၀ မိနစ်ကနေ ၁၅ မိနစ်အတွင်း ကြည့်လို့ရပါပြီ။6. စစ်ပြီးသား ပစ္စည်းတွေကို ပါတဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲ သေချာထည့်ပိတ်ပြီးမှ စွန့်ပစ်ပါ။
Test Kit မှာ C ရယ် IgG ရယ် IgM ရယ်ဆိုပြီး သုံးနေရာ တွေ့ရပါမယ်။ C က Control ပါ။ စစ်တိုင်း C မှာလိုင်းပေါ်ရပါမယ်။ Covid 19 မှာ Antibody နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ IgG နဲ့ IgM ပါ။ IgM က ရောဂါပိုးဝင်ပြီးမကြာခင် သွေးထဲမှာပေါ်ပြီး IgG က နောက်ပိုင်းမှပေါ်တာပါ။
C တစ်လိုင်းထဲမှာပဲ ပေါ်နေရင်
C တစ်ခုထဲပေါ်ပြီး IgG ရော IgM ရော မပေါ်ရင် ရောဂါပိုးကူးစက်မခံရသေးတာပါ။ ဒါမှမဟုတ် အရမ်းစောလို့ မပေါ်သေးတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
C ရယ် IgG ရယ် နှစ်လိုင်းပေါ်နေရင်
ကိုဗစ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး ကိုယ်ခံအားထွက်နေတာပါ။ ရောဂါကိုခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အဆင့်လို့ ပြောနိုင်ပါပြီ။ ဒီအဖြေဟာ လူတစ်ယောက်အတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေလို့တောင် ပြောနိုင်ပါတယ်။ Covid 19 ကို ကိုယ်ခံအားရသွားတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီး အခုလိုပေါ်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး Covid 19 ကို ဖြန့်ဝေသူလည်း မဖြစ်နိုင်သလို ကူးစက်သူလည်း မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ IgG က ခြောက်လလောက်အထိ ပေါ်နေနိုင်ပေမဲ့ Antibody ဆိုတာ ကိုယ်မသိလိုက်ဘဲ အချိန်မရွေးပျောက်သွားနိုင်လို့ ဂရုစိုက်တာတော့ အကောင်းဆုံးပါ။
C ရယ် IgM ရယ် နှစ်လိုင်းပေါ်နေရင်
ကိုဗစ်ရောဂါပိုး ကူးစက်ပြီးခါစဖြစ်လို့ အများကို မကူးစက်အောင် ဘယ်သူနဲ့မှ မတွေ့ဘဲ နှစ်ပတ်ကြာ Isolate လုပ်ရပါမယ်။
Antibody ထွက်နေပေမဲ့ ရောဂါပိုးရှိနေတုန်း ဖြန့်နိုင်တုန်းမလို့ Isolate လုပ်ပေးရပါမယ်
ဘာမှမပေါ်ရင်တောင် C ကတော့ ပေါ်ကိုပေါ်ရပါတယ်။ C လုံးဝမပေါ်ရင် သွေးထည့်တာနည်းတာ၊ ဆေးထည့်တာနည်းတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Test kit error တက်တာလည်းဖြစ်နိုင်လို့ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်စစ်ရပါမယ်။
Antibody ထွက်ပြီးပြီဆို Mask တပ်စရာမလိုတော့ဘူးလား
တခြားရောဂါတွေဆိုရင်တော့ Antibody ထွက်ပြီးရင် တော်ရုံမကူးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မာယာများတဲ့ ကိုဗစ်ဖြစ်နေတော့ လုံးဝမကူးနိုင်တော့ဘူးလို့ ကြိမ်းသေမပြောရဲပါဘူးတဲ့လေ။ နောက်ဆုံးပေါ် ရောဂါဆိုတော့ စူးစမ်းလေ့လာနေကြတုန်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် Antibody ထွက်လည်း သတိထားပါ။
အပြင်ထွက်ရင် Mask မတပ်ဘဲမနေပါနဲ့ ။ Mask တပ်ပေးပါ။
ပစ္စည်းတွေ ဝယ်လာလည်း ပိုးသတ်ပေးပါနော်။ သတိဆိုတာပိုတယ်လို့ မရှိပါဘူး…
အားလုံးကျန်းမာပြီး ကိုဗစ်ကင်းစင် ပြုံးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ
ဒေါက်တာနုမြတ်သိင်္ဂီဦး@Dr. Nu Myat Theingi Oo